SomaliTalk.com » 2014 » June » 03
Home » Archive Maalinta June 3rd, 2014
GOGOL-DHIG Allaah ayaa mahad oo idil iska leh, nabadgalyo iyo naxariisina Nabigeenna Muxammad ah korkiisa Allaha yeelo. Intaa kabacdi, Aqrisyoow mudadii burburka ee 23-sano iyo dheeraadka aheyd dalkeena hooyo wuxuu noqdey “Qubrustii Jawaasiista!”. Wadamada dariska gaar ahaan Ethiopia waxeey sirdoonkeeda heerarka kala duwan ka dhexsameeysatey Soomaalida, iyadoo kuweedana dalkeeda ka keeneeysey...
Shirkii London ee looga hadli lahaa Batroolka Soomaaliya oo ka baaqday dhanka dawladda Soomaaliya
Waraysi uu bixiyey wasiirka macdanta iyo batroolka u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in uu baaqday shirkii horraanta bishan June 2014 lagu qaban lahaa London, shirkaas oo ka baaqday dhanka dawladda federaalka soomaaliya. Dhegeyso waraysiga Read More →
Jabhada ONLF oo noqotay Jabhadii ugu daggaalka dheereed Geeska Afrika.
Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya (JWXO/ONLF) oo halgamaysay muddo 30 sanno ah qorigana ridaysay 20 sanno oo kaamil ah ayaa noqotay jabhadii ugu halganka dheereed ee la daggaalanta gumeysiga Ethiopia. Iska hor imaadyadii lala galay dowladihii kala gadisnaa ee ka talin jiray Ethiopia ama boqortooyadii Abbysinia waxaa kamid ahaa Daggaalkii Axmed Gurey oo socday muddo 16 sanno ah (1527-1543). Daggaalkii...